Kanada - KU SOO DHAWEYN
ACCUEIL » SPORTS »Kanada
Kanada gudaheeda, Talaadada kulanka CONCACAF ee Qaramada Midoobay ee ka socda Mareykanka ee ka dhacaya magaalada Toronto waxaa loo soo bandhigayaa "xafiilnimo soo cusbooneysiisay". Marka si macno leh loo dheelo kubada cagta, iyo xitaa iyada oo loo maleynayo in ay tahay shaqada Ururka Kubadda Cagta Kanada in ay qaab cayaareedkan siiso, waxay u egtahay hadal aan macquul aheyn.
Markii ugu dambeysay ee ragga xulka qaranka Canada ay ka adkaadaan Mareykanka waxay ahayd guushii saaxiibtinimo ee 2-0 ee 1985. Marka la eego ciyaaraha tartamada, waa inaan dib ugu laabanaa 1980, sanadkaas Canada ayaa ka adkaatay 2-1 isreebreebka Koobka Adduunka. Waxaa jiray qaar guuldarrooyin ah, oo ay ku jiraan semi-finalka Koobka 2007 Gold Cup, markii Atiba Hutchinson uu barbardhaca soo daahay. de waa la joojiyay sabab la xiriirta bayaan banaanka. Taasi waxay dhahday, guuldaradii aan laga adkaan ee Mareykanka ee ka dhanka ah deriskooda waqooyiga waxay u dhigantaa ciyaaraha 17.
Hadana markii ugu horeysay, laga yaabee muddo tobanaan sano ah, barnaamijka ragga ee Kanada wuxuu la kulmayaa horumar aad u weyn. Shaqaalaha markabka maamula John Herdman ayaa nasiib u yeeshay inay awoodaan inay weeraraan, illaa xad intaas la eg Cyle Larin - oo amaah loogu siiyay Zulte Waregem ee reer Turki ee warshadda tamarta ee Besiktas - ayaa gebi ahaanba laga tegay, iyadoo Gent ay ku jirto Jonathan David iyo Junior Hoilett ee magaalada Cardiff doorbiday ciyaarta
Iyada oo hibooyin sida ee Bayern Munich, Mark-Anthony Kaye iyo Toronto FC Jonathan Osorio sidoo kale liiska, marka lagu daro xaqiiqda ah in Mareykanka uu hoos u dhacay, kooxda Kanada waxay ku rajo weyn tahay dhamaadka taxanaha.
Kordhinta Kanada ee maalgashiga ayaa sidoo kale imaneysa waqtiga saxda ah. Qaabdhismeedka cusub ee isreebreebka Koobka Adduunka ee CONCACAF, lixda kooxood ee ugu sareysa waxay si toos ah ugu qulqulaan Hexagonal, halka kuwa kale lagu qasbay inay u tartamaan tartan waalan oo ay ugu soo baxeen boos ay ugu soo baxaan. Kaalinta sedexaad ee Kanada, guul ka gaareyso Mareykanka waxay ku meeleyn kartaa booska lixaad ee damacsana.
Waa wax aad u xiiso badan. Waligey maan sameynin ciyaartoy da ’yar oo naxariis badan, geesinimo iyo karti badan,” ayuu yiri Vancouver. Whitecaps iyo difaaca Kanada Doneil Henry la hakiyey kulanka talaadada. Waxaan u maleynayaa in [Herdman] uu aad ugu fiicnaa aqoonsiga ciyaartooyda, ku lug lahaanshihiisa isla markaana siiyay kalsooni. Qof walba door ayuu ku leeyahay inay ciyaaraan si wanaagsan ayayna sameynayaan.
- CONCACAF League of Nations: Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad ogaato
- N. Davis: Sargent wuxuu sheeganayaa cinwaanka weeraryahanka Mareykanka ee mustaqbalka
Ganaaxa Henry si weyn ayaa loo hakiyey maxaa yeelay intii lagu gudajiray weerarka Kooxda reer Kanada waxay umuuqataa inay kujiraan gacmo wanaagsan, xulashada Herdman ee gadaal ma ahan kuwa adag. Daciifnimadu waxay timid xilli lagu gudajiray koobka wareega quarter-finalka dahabka ah ee ay la ciyaareen Haiti xagaagii lasoo dhaafay, markii Canada ay ku garaacday horusocodka 2-0 ka hor inta aysan lumin 3-2. Xaqiiqadan ayaa joojisay hadalkii sheekha ee Kanada ay geli karto marxalad cusub.
“Waxaan u maleynayaa inaan wali sii yara hormarinayno nafteena,” ayuu yiri taliyihii hore ee xulka qaranka Canada Stephen Hart. hadda waxay maareysaa HFX Wanderers Horyaalka Kanada. Kooxda ayaa ciyaaray kulamo aad u wanaagsan. Xaqiiqdii lama aysan kulmin mucaarad la xaqiijiyay.
Hase yeeshe soo saarista ciyaartoy weerar ah inta badan waa qeybta ugu adag ee hal abuurka horumarka ciyaarta, oo Mareykanku ku mahadsan karo, marka loo eego banaanka Christian Pulisic Mareykanka ma awoodo inuu weeraro xulashooyinka waqtigan.
Marka sidee u macnayn kartaa koritaanka kartida Kanada? Sida xaaladaha badankood, ma jiraan hal sabab oo keliya laakiin sidoo kale jahwareer xagga qodobbada soo dhoweynta. Kanada waxay muddo dheer hurdo u ahayd CONCACAF. Marka loo eego af-hayeenka CSA, waxaa jira in ka badan ciyaartoy diiwaangashan oo ah 865 000, taasoo ka dhigaysa heerka kaqeybgalka ugu sareeya ee dalka - haa, xitaa in kabadan hockey.
Herdman ayaa yiri: "Waxaan u maleynayaa in wadan walba uu u muuqdo meel fiican, taasina waa wax iska caadi ah kubada cagta caalamka," ayuu yiri Herdman. Waxaad aragtaa dalal u qalmi kara jiil dhalinyaro ah. Waxaan ku aragnay CONCACAF, Yurub iyo daafaha adduunka. Waa arin iska caadi ah inaad leedahay jiilalkan. ”
Laakiin Herdman wuxuu intaa ku daray in ciyaartooyda Canadian-ka ay hada heystaan ​​haadooyin ka badan kuwii hore, sida ay cadeeyeen farshaxan yahanada caanka ah.
Tusaale ahaan David iyo Hoilett waxay noloshooda oo dhan ku qaateen Yurub. Davies iyo Osorio waa agabyada akadeemiyada MLS ee ku yaal Vancouver iyo Toronto, siday u kala horreeyaan. Kaye wuxuu ku caanbaxay TFC laakiin wuxuu dib ugu soo noolaaday USL oo uu ku qaatay magaalada Louisville wuxuuna ku guuleystay LAFC, halkaas oo uu si caadi ah u joogo. Samuel Piette wuxuu ku qaatay qeybtiisii ​​hore ee xirfadiisa Yurub laakiin wuxuu ku laabtay Kanada oo wuxuu hadda ciyaaray 76 horyaal iyo koob Koobka ah ee Montreal Impact.
John Herdman wuxuu door weyn ka qaatay dib-u-dhiska Kanada. ka dib markii milicsiga ee CONCACAF. Omar Vega / Getty Images
Bilaabida akadeemiyada MLS ee loo maro Toronto FC, Montreal Impact iyo Vancouver Whitecaps, iyo sidoo kale machadyo gaar loo leeyahay sida Sigma FC oo fadhigeedu yahay Toronto, ayaa sidoo kale aasaas aasaas wanaagsan leh. Kuwa hore ee caalamiga ah ee Kanada sida Patrice Bernier, oo hadda ah kaaliye Saamaynta, farqiga u dhexeeya maanta iyo daqiiqada uu galay horaantii 2000 waa mid cad.
Wuxuu yidhi: "Qaar badan oo naga mid ah ayaa aadeen USL ama Europe, waxayna u ekeyd sidii dabeecada oo kale," ayuu yidhi. "Heerka dhalinyarada, ma jirin jawi xirfadeed oo dhab ah xagga tababarka, xitaa hadaan la jirnay kooxaha gobolka ama xarumaha waxqabadka sare. Ma ahayn maalin kasta. Hadda, carruurta 13, sannadihii 14, waxay tababar siinayaan maalin kasta si ay u horumariyaan xirfadooda, si ay u rumeeyaan riyadooda ah inay noqdaan xirfadlayaal. Ma aanan haysanin [qalab] isku mid ah. "
Tan iyo 2011, Thanks to dadaalka Director Farsamo Tony Fonseca, balanqaad ayaa sidoo kale loo sameeyay dhalinyarada Kanada. Kooxaha qaranku waxay u ciyaari doonaan sidii ciyaarta hanti la wareegista iyo dariiqa tooska ah ee difaaca / difaaca nolosha.
Waxaan dooneynay inaan ka guureyno sheekada hore ee kubada cagta Canadian oo aan aheyn kaliya ciyaar isboorti iyo tartan. u qalma, laakiin isku day inaad siiso fursado badan dhalinyarada da 'yarta ah ee ku jira xeryaha horumarinta ee 15, iyo bey'ada wanaagsan, iyo in laga shaqeeyo tandem ururada naadiyadaan lana dhiso cilaaqaadkaas, "ayuu yiri tababarihii hore ee U20 Kanada iyo Agaasimaha CPL ee hadda jira, Valor FC Rob Gale.
Kooxaha Canad dhab ahaantii waxay cagta saareen mudadii kalaguurka. U20 kama aysan ciyaarin Koobkii Adduunka tan iyo 2007, waana sanadkii guriga Kanada. Laakiin macaashku waa cad yahay: sannadihii ka hooseeya 15 ee Kanada ayaa dhigay afarta sare ee CONCACAF labadii wareeg ee ugu dambeysay. M17 ayaa ku sii jeeda Koobka Adduunka bisha soo socota.
Herdman ayaa loo magacaabay tababaraha xulka qaranka 2018. Qaar ka mid ah dadaalkiisa ayaa ku guuleystay abuuritaanka iskaashi ka dhex dhaca kooxda dhexdeeda.
"Waxaan u maleynayaa tan iyo imaatinka Herdman, uguma yeeri karo inay tahay aaminaad cusub, laakiin fikir cusub oo aan ku matalo Kanada, inaan ka dhigto maaliyada xulka qaranka inay muhim u tahay tii kooxdaada, hadii kale. inbadan, ”ayuu yidhi Bernier.
mustaqbalka, gaar ahaan Kanada, oo si wada jir ah u martigelin doonta 2026 Koobka Adduunka oo ay weheliyaan Mareykanka iyo Mexico. Intii uu tababarayay Kooxda Haweenka Qaranka ee Kanada, wuxuu meel mariyey wixii uu ugu yeedhay barnaamijka EXCEL, kaas oo aasaasaya kaabayaal la xidhiidha shaqada la qabtay xulka qaranka iyo daneeyayaasha kala duwan ee hoose. Herdman hadda waxay dejisay qaab la mid ah dhinaca ragga.
Waxaan dareemay sidii in dalku leeyahay rajo badan. Laakiin hoos udhaca ayaa ahaa inaanu wadan weyn nahay oo nalagu mannaystay, ”ayuu yiri Herdman. Nidaamkeena kubada cagta wuxuu kuxiran karaa dhamaan dhibcaha mashiin kubadeed oo run ahaan hufan, mashiin horumarineed ciyaartoy, nidaam dhab ahaantii keeni kara tayo badan oo aan heysano xulashooyinka saxda ah si aan awood ugu yeelno rajo. nidaamyada ugufiican. "
Herman wuxuu doonayaa inuu hubiyo in xididdada ay qoto dheer yihiin. Xaqiiqdii wuxuu la shaqeeyay da 'da' ka yar ee 15 iyo wixii ka hooseeya 17 sano ee waddanka heer gobol si "Calanka Kanada loo dhigo horreyso ciyaartoydan". Loogu talagalay barnaamij leh dhaqan soo jireen ah oo luminaya laba jinsiyadeed, sida Owen Hargreaves iyo Asmir Begovic isku xirnaanta noocan oo kale ah way midho dhali kartaa.
Herdman ayaa yiri: “Waxay kuxirantahay dhaqamo badan iyo qaab xeeladaysan, waxayna ogaadeen in tababaraha xulka qaranku uu runtii danaynayo waxa ka socda heerkaas isla markaana uu soo ogaado mustaqbal kasta oo jira markan,” ayuu yiri Herdman. "Taasi waa qeyb weyn oo ka mid ah waxa aan isku dayeynay inaan ku dhisto dalkan, inay jiraan meelo badan oo dhalinyaro ah oo aan kula xiriirno ciyaartoydeena da 'yarta xulka qaranka iyo calankan."
Waa maalmo hore wixii Herdman hirgalinayo, laakiin rajo weyn ayaa jirta. Kordhinta CPL waxay bixisaa saldhig lagu ballaariyo barkadaha ciyaartoyga.
Waxaan u maleynayaa in isbadal weyn, ilaa xulka qaranka uu ka ogaanayo mid ka mid waqtiyadaas waa weyn ... waxay la mid aheyd kooxda haweenka, waxaad ku guuleysatay billadaha markii ugu horeysay. waqti, waardiyayaashu way dhacaan, ”ayuu yidhi. "Dadka aan sida caadiga ah aaminin nidaamka kubada cagta maxaa yeelay maahan inay soo saaraan, waxay bilaabaan inay dareemaan inay qayb ka yihiin, waxayna bilaabaan inay dareemaan kalsooni waxayna doonayaan inay caawiyaan nidaamka. Kooxdayada qaranku waxay qayb weyn ka qaadanayaan dardargelinta guusha waxa hoos ku dhacaya haddii aan rabno inaan keeno isbeddel waarta. "
Talaadada waa fursadda ugu weyn ee Kanada.
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/canada-can/story/3964612/canadas-rebuild-needs-a-signature-win-can-they-take-down-the-us
Ronaldo? Ugu yeer "CR700"! - Maalinlaha #557 - VIDEO
La star de Liverpool, Mo Salah, revient pour vérifier si un garçon est tombé sur un réverbère – VIDEO
#pakgne #poupy #muriel white pakgne xilli 3 xirmada - HALKAN KA DAAWO VIDEO
Astaamaha 10 inaad tahay dhibbaneyaasha "Gaslighting", kalgacal jacayl by khalkhal ku saabsan narcissistic qallooc - SANTE PLUS MAG
Tilmaamaha: 36 kiisaska DIY ee hal-abuurka leh
Andrew Featured Munaasabadaha Xusuusta - Dadka
DADKA & LIFESTYLE7,340
Video dheeraad ah3,352